Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 13)
Qolka IWork wuxuu helayaa "Wada shaqeynta waqtiga dhabta ah" waana la cusboonaysiiyay
Apple waxay u aragtay inay ku habboon tahay inay cusbooneysiiso dhammaan qaybta Apple iWork oo ay la socoto "Real Time Collaboration", oo ah nidaam iskaashi waqtiga dhabta ah.
Super Mario wuxuu joogi doonaa App Store
Apple waxay hada ku dhawaaqday xogta keydkeeda App-ka ee Muhiimka ah waxayna nagala yaabisay ciyaar Super Mario ah. Ha seegin waxa cusub ee ka imaan doona Nintendo.
Apple waxay raadineysaa alaab-qeybiye si ay ugu soo dallacdo iPhone-ka soo-kicinta
Waxay umuuqataa in Apple aysan kaliya helin nidaamka xukun kicinta ee ay jeceshahay waxayna dooratay inay ka dhex raadiso bixiyeyaasha kala duwan ee suuqa.
IPhone 7 wuxuu isticmaali karaa noocyo badan oo isku xirnaanta Bluetooth ah oo loogu talagalay dhagaha dhagaha
Apple waxay bilaabi kartaa sameecadaha dhagaha ee u isticmaali lahaa isku xirnaansho ka duwan kan caadiga ah ee Bluetooth, mid xasiloon oo leh adeeg batteri oo hooseeya
Apple waxay diiwaangelisaa "Iris Image Engine" iyo "AirPods"
Garyaqaan ganacsi ayaa soo saaray magacyadii ugu dambeeyay ee shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ay ka diiwaangashatay Mareykanka.
Apple Music for Android waxay gaareysaa 10 milyan oo soo degsasho ah
Sannad ka hor Apple ma sii deyn Apple Music ee loogu talagalay Android, Apple ayaa ku qulqulaya muusikada, waxayna horey u leedahay 10 milyan oo soo dejin ah.
Bragi waxay soo saareysaa samaacado cusub oo sameecado leh
Sida lagu dhawaaqay, soo saaraha sameecadaha dhagaha ee Bragi ayaa hada xaqiijiyay inuu bilaabayo cusub iyo ...
Tim Cook wuxuu ka hadlayaa iswaafaqsanaanta qalinka Apple iyo iPhone-ka
Saacado gudahood laga soo bilaabo Nuxurka iPhone 7 Tim Cook wuxuu qoraal ku soo jeedinayaa iswaafajinta suurtagalka ah ee qalinka Apple iyo iPhone-ka cusub.
Habee ogeysiisyada ku saabsan barnaamijka boostada
Waxaan ku tusineynaa sida looga saaro xumbada arjiga boostada si aad u hesho kaliya emayllada aad rabto in lagugu wargeliyo. Ha moogaan
Apple wuxuu kordhiyaa amarrada qaybaha iyo qaybo ka mid ah iPhone 7
Apple waxay kordhisay amarrada qaybaha iyo qaybaha lagama maarmaanka u ah soo saarida iPhone 7 iyo 7 Plus ee soo socda, sida laga soo xigtay ilo ku sugan Taiwan.
Raac soo bandhigida iPhone 7 ee ku saabsan iPhone News
Actualidad iPhone waxay diyaarineysaa caymis gaar ah oo ku saabsan soo bandhigida dhacdada cusub ee iPhone 7 iyada oo loo marayo bartayada, shabakadaha bulshada iyo podcast.
Sida loo isticmaalo Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Safari oo leh iOS 10
Tababar kooban oo aan ku tusineyno sida loo furo laba tabari oo Safari ah isla shaashadda iPad-ka isla markaana leh iOS 10
Corning waxay ku dhawaaqeysaa Gorilla Glass oo loogu talagalay Qalabka Wearable
Gorilla Glass SR +, waa qalabkeedii ugu dambeeyay ee loogu talagalay oo loogu talagalay alaabta la gashado. Waxay ballan-qaadaysaa astaamo ka wanaagsan kan safayr safayr.
Tani waxay noqon kartaa iPhone-ka cusub ee madow 7
Moodooyinkaan 3D-ka ah waxay na tusayaan sida iphone-yada cusub ee madow iyo dhalaalaya ay u soo bandhigi karaan Apple bisha Sebtember 7
Saacadda Apple Watch waxay ku dhowdahay inay ka dhammaato saamiga
Qorshayaasha Apple ee ah inay yareeyaan saamiyada iyagoo hoos u dhigaya qiimaha jiilka koowaad ee Apple Watch waxay umuuqdaan inay sifiican ushaqeeyeen.
Plantronics wuxuu na tusayaa sameecadaha cusub ee Bluetooth-ga ee IFA 2016
Plantronics waxay soo bandhigeysaa samaacadaha dhagaha ee cusub ee sanadkaan oo leh midabyo cusub oo loogu talagalay moodelkeeda isboorti iyo moodooyinka cusub ee isku dhafan
Apple waxay soo saari doontaa dhagaha dhagaha ee cusub ee iPhone 7 Keynote
Nooca Beats, oo ay iibsatay Apple, wuxuu ku wargelinayaa warbaahinta Faransiiska in aan ku arki doonno samaacado cusub Khadka ugu muhiimsan ee iPhone 7.
Alaab-qeybiyeyaasha galaaska qalooca ee iPhone-ka ee 2017 ayaa horay uga shaqeynayay
Shirkadaha Apple alaab-qeybiyeyaashu ma rabaan wax layaab leh, sida ay sheegeen ilaha silsiladaha keena, waxay horeyba uga shaqeynayaan muraayadda qalooca ee iPhone iPhone 2017
Tim Cook wuxuu sheegay in Apple wax qalad ah uusan ku sameynin Ireland ayna tahay "qashin siyaasadeed"
Tim Cook wuxuu sheegay in heerka canshuurta wax ku oolka ah (0,005%) ee ay soo sheegeen komishanku ay tahay mid been abuur ah oo waliba ku calaamadeeyay "qashin siyaasadeed".
Sawirka Iris ayaa imanaya iPhone sanadka soo socda
Waxay u muuqataa in adeegsadayaasha iPhone-ka ay tahay inay sugaan muddo sanad ah in shirkaddu ay ku soo saarto iPhone iphone scanner ah sida Samsung Note 7
Samsung ayaa curyaamisay shixnadihii Galaxy Note 7 qaraxyo awgood
Samsung ayaa go'aansatay inay joojiso shixnadaha qaar ka mid ah aaladda iyadoo isku dayaysa inay caddeyso arrinta qaraxyada.
Sida loo sameeyo astaanta Apple ee iPhone 6 iyo 6s iftiin
Qalabka aan hoosta ku tusno waxaad ku iftiimin kartaa tufaaxa iPhone-kaaga si fudud oo dhaqaale ah.
Wehelku waa codsi loogu talagalay macruufka iyo Android kaas oo u oggolaanaya kuwa aad dooratay inay ku weheliyaan inta lagu jiro safarkaaga mahadnaqa casrigaaga
EOTW, baakad caan ah oo isboorti u leh isboortiga loogu talagalay iPhone
Ma raadineysaa waddo aad ku qaadatid iPhone-kaaga inta aad isboortiga sameyneyso? Haddii aadan jeclayn xarkaha, xulashada wanaagsan ayaa ah xirmooyinka taageerayaasha isboortiga ee EOTW.
Dhibaatooyinka isticmaaleyaal badan leh App Store-ka loogu talagalay iOS, Mac iyo tvOS
Bakhaarada macOS, tvOS iyo macruufka ee iOS ayaa waxaa soo foodsaaray dhibaato xoogaa hortaagtay helitaankooda mudo labo saacadood ah.
Belkin wuxuu ku dhiiradaa Dock loogu talagalay Apple Watch iyo iPhone
Ragga Belkin waxay bilaabeen deked cusub oo noo oggolaaneysa inaan ka qaadno iPhone iyo Apple Watch isku mar maalmo gudahood markii la bilaabay iPhone 7.
"AirPods" waxay noqon kartaa mid dhab ah marka loo eego shahaadooyinkan
EAEC waxay gacanta ku haysaa dhowr shahaado oo ku saabsan samaacadaha sameecadaha oo ka hoos shaqeyn doona astaanta AirPods.
Sida loo hubiyo batteriga haray ee qalinka Apple
Adigoon haysan wax horseed ah oo na tusaya heerka batteriga ee qalinka Apple, Apple waxay si toos ah noo siineysaa macluumaadkan iPad-ka
Khiyaamada ugufiican ee looga faa iidaysto Safari macruufka (2/2)
Waxaan kuu soo qaadaneynaa liistada labaad oo leh tabaha ugu fiican si aad uga faa'iideysato Safari ee iOS, sida had iyo jeer, casharrada ugu fiican ee ku saabsan iPhone News.
Imtixaanka waxqabadka u dhexeeya macruufka 9.3.4 iyo 9.3.5
Waxaan ku tusineynaa fiidiyowyo dhowr ah oo aan ku arki karno kala duwanaanshaha amniga iyo waxqabadka u dhexeeya macruufka 9.3.4 iyo iOS 9.3.5
Heshiiskii dhowaan ay Intel la gashay shirkadda ARM wuxuu u oggolaanayaa inay samayso jibbaarro iyadoo la adeegsanayo qaab-dhismeedkaas, kaasoo irrida u furaya inay la wareegto qalabka loo yaqaan 'iPhone'.
Galabnimadan Axada waxaan kuu soo qaadaneynaa tabaha ugu wanaagsan ee aad uga faa'iideysan karto Safari-ka ku jira IOS, sida had iyo jeer ah, casharrada ugu fiican ee ku saabsan iPhone News.
Ragga jooga Kanex waxay bilaabeen saldhiggii ugu horreeyay ee lacag-bixinta ee ay Apple caddeysay si aan ugu soo dallaci karno Apple Watch illaa 6 jeer hab la qaadi karo.
Tallaabooyin yar gudahood waxaad ku heli doontaa dhammaan kanaallada adduunka ee ku jira iPhone-kaaga ama iPad-ka, waxaanan kuu sharxi doonnaa sida ay tahay, mahadnaqa Wiseplay.
Apple waxay rabtaa Unicode inay ku darto 10 emoji dheeraad ah, sida cirbixiyeenka iyo garsooraha
Apple waxay weydiisatay Unicode inay ku darto 10 emoji dheeraad ah, 5 rag ah iyo 5 dheddig ah, oo ka kala socda xirfado kala duwan, sida cirbixiyeen ama garsoore.
Sida looga hortago in WhatsApp ay macluumaadkaaga u dirto Facebook
Sidaad ogtahay oo saaxiibkeen Luis Padilla wuxuu qoraalkiisa ku gaarsiiyay WhatsApp iyo sida loo sameeyo ...
Spigen wuxuu bilaabayaa kiisaska ugu horeeya ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus
Halyeeyga kiiska soo saaray Spigen ayaa hada soo saaray kiisaska ugu horeeya ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus.
Chromecast 2, waxaan falanqeyneynaa Google "AirPlay" [VIDEO]
Chromecast 2, nooca jaban ee AirPlay ee Google suuqa ku haysto. Waxaan kuu sheegeynaa waxtarkeeda iyo xaddidaadaha si aad miisaan ugu yeelatid iibsigaaga.
Taleefanka iPhone-ka ee mustaqbalka ayaa duubi kara tuugada isla markaana kaydsan kara farahooda, sida uu dhigayo patent-ka
Sida lagu sharaxay patent-ka Apple, iPhone-ka ayaa duubi kara tuugada isla markaana kaydsan kara farahooda si hadhow loogu soo gudbiyo booliska.
Daadinta cusub waxay soo jeedineysaa 16GB iPhone inuu dhammaaday
Daadinta ugu dambeysay ee la xiriirta iPhone 7 waxay muujineysaa in qaabka keydinta aasaasiga ah uu noqon doono 32 GB, iyadoo laga tagayo yaraanta 16 GB
Samsung ayaa soo saartay Beta si ay ugu isticmaasho iPhone Gear S2 smartwatch
Samsung horeyba waxay udhawdahay inay diyaariso arjiga noo ogolaan doona inaan ku isticmaalno Samsung Gear S2 Samsung iPhone-kiisa, waxayna bilaabeen barnaamij Beta ah oo lagu tijaabin karo.
Jackery wuxuu na siinayaa fiilo danab leh oo leh batteri isku dhafan
Soo saaraha Jackery wuxuu na siinayaa fiilo hillaac ah oo leh batari isku dhafan oo ah 450 mAh kaasoo naga badbaadin doona baahida dheeraadka ah ee batteriga ku jirta iPhone-ka.
Hadda waxaad u sheegi kartaa YouTube inaadan xiiseyneynin talooyinkooda
Hadda waxaan ogeysiin karnaa inaanan xiiseyneynin waxyaabaha lagu taliyay ee YouTube, sidaa darteed Google ayaa horumarin kara waxyaabaha lagu taliyay.
Patent-ka Apple wuxuu qeexayaa aalad hagitaan ah oo ku saleysan Xaqiiqada Daartay
Ruqsad cusub oo ka socota Apple oo sharraxaysa aaladda hagidda ayaa muujineysa danaha kuwa ku jira Cupertino ee 'Augmented Reality', ama AR.
Dhibaato daran ayaa saameyn doonta shaashadaha iPhone 6 iyo 6 Plus
Guul darrooyinka halista ah waxay ku dambayn kartaa ka tagista shaashadda iPhone 6 iyo 6 Plus oo gebi ahaanba aan waxtar lahayn adigoon aqoonsan kicinta taabashada.
Dhammaan Safarka Spain ee ku saabsan iPhone-kaaga oo wata barnaamijka rasmiga ah
Dalxiiskii Isbaanishka wuxuu horeyba uga sii socdaa Jasiiradda Iberian waxaadna haysataa fursad aad kula raacdo dalabka rasmiga ah
Android 7.0 Nougat fiiri waxa ku cusub Android marka loo eego iOS 10
ndroid Nougat waxay u dhowdahay geeska, xaqiiqdii, Google wuxuu bilaabay inuu sii daayo nidaamka cusub adoo adeegsanaya OTA waxaanan isbarbar dhigeynaa iOS 10.
Sidee loo maareeyaa feylasha ay heleen iOS 10 Messages
Mid ka mid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan ee macruufka 10 waa, mar labaad, farriimaha cusub ama codsiga iMessage. Halkan waxaan kuugu sheegeynaa sida loo maareeyo waxa ay noo soo diraan.
Saddex toddobaad laga bilaabo macruufka 10, korsashada iOS 9 waxay ku dhufatay 87%
IOS 9 way sii kordheysaa, gaar ahaan ka dib markii la cusbooneysiiyay mid la mid ah kii loo yaqaan 'iOS 9.3.4' ee aan helnay dhawaanahan oo aan la imaan wax war ah.
Apple waxay soo saari doontaa iphone iyadoo leh shaashad OLED qalooca sanadka 2017, laakiin waxay noqon doontaa nooc qaas ah
Sida laga soo xigtay Nikkei, Apple waxay soo saari doontaa iPhone oo leh shaashad Curled OLED ah sanadka 2017, laakiin qaabkani wuxuu noqon doonaa qalab gaar ah. Kadib ma bilaabi doonaan 3 iPhone?
Android iyo IOS waxay horey u xukumaan 99% suuqa mobilada adduunka
Boqolkiiba 99 aaladaha mobilada ee aan ka aragno suuqa adduunka waxay leeyihiin iOS ama Android oo ah nidaamka ay ku shaqeeyaan.
Sida loo simo iPhone-kaaga adoo siinaya jawaab celin fiican
Isbarbardhigga baasku wuxuu si aad ah u hagaajiyaa codka muusikada, taasoo kuu oggolaaneysa inaad jawaab fiican ka hesho dhagaha dhagaha ama kuwa ku hadla dibedda.
Sidee eBooks loogu daraa iBooks adigoon soo marin iTunes
Ma rabtaa inaad ku darto buugaag elektaroonig ah ama eBooks iBooks adigoon soo marin aaladda iTunes ee daalka badan? Qoraalkan waxaan ku baranaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Waxaan tijaabinay Lumsing's 13000mAh powerbank
Waxaan tijaabinay Lumsing powerbank oo leh awood 13000mAh ah oo awood u leh inaan ku soo dallacno iPhone-keena illaa 6 jeer.
In IPadku uusan haysan codsi Kalkuleytar wuxuu leeyahay sharraxaaddiisa, qof horay uga shaqeyn jiray shirkadda ayaa shakiga naga saaray isagoo noo sheegaya sababta.
Warka ku saabsan Frank Ocean, farshaxanku wuxuu sidoo kale si gaar ah u sii daayay Apple Music shaqo la yiraahdo "Dhammaad", album muuqaal ah.
Google, Apple iyo illaa soddon iyo saddex shirkadood oo kale ayaa go'aansaday inay ku biiraan xoogagga ka dhanka ah taleefanka SPAM ee "Robocall Strike Force".
Xanta ayaa tilmaamaysa xasiliyaha indhaha ee iPhone 7
Muuqaal cusub oo si qarsoodi ah u soo baxay ayaa dhawaan muujinaya in moduleka kamaradda ah ee iPhone 7 qaybtiisa 4,7-inji ah dib loo qaabeeyey.
Sida looga saaro booska ay cusbooneysiiyaan macruufka ee iPhone iyo iPad
Markasta oo Apple ay soo saarto cusbooneysi cusub, waxaa si toos ah loogula soo baxaa oo keliya aaladaha la jaan qaadi kara oo ...
IPhone 8 oo leh shaashadda OLED? Kaliya «Gaar Gaarka ah», sida uu qabo falanqeeyaha
Mustaqbalka shaashadaha iPhone-ka wuxuu marayaa shaashadda OLED, laakiin mid ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya inaysan gaari doonin dhammaan iPhone 8 sanadka soo socda.
PlayStation 4-ka ka dheeho iPhone-gaaga ama iPad-kaaga adoo adeegsanaya casharradan [VIDEO iyo DHAQANKA]
Maanta waxaan kuu keenaynaa casharro cajiib ah oo wata codsi aad ugu ciyaari karto PlayStation 4 taleefankaaga iPad-ka ama iPhone-ka si fudud oo aan lahayn Jailbreak.
Nadiifiye Pro - Ka saar xiriirada nuqul, bilaash wakhti xaddidan
Codsiga bilaashka ah ee aan maanta ku tusineyno waa Cleaner Pro, waa codsi noo ogolaanaya inaan ka tirtirno xiriirada nuqul ka iPhone-ka
Apple wuxuu ku xadidi karaa shaashadda AMOLED nooca "Pro" ee iPhone 8 ah
Apple waxay qaadan kartaa tiknoolajiyada AMOLED ee shaashadda iPhone 8 laakiin kaliya qaabkeeda Pro, iyadoo la adeegsanayo inta hartay shaashadaha LCD ee hadda jira.
Toddobaad isticmaalkeed kadib, Gboard waa kiiboodhka bedelka ugu fiican ee iOS
Gboard shaki la'aan waa mid ka mid ah teebabka ugu fiican ee aan ka helnay macruufka "App Store" waanan kuu sheegi doonaa sababta.
Apple waxay shaqaaleeysaa koox tifaftireyaal ah oo ku saabsan heesaha heesaha ee Apple Music
IOS 10 waxay ku balan qaaday heesaha heesaha ee Apple Music ka codsiga Music waxayna umuuqataa inay dhowaan imaandoonaan, maadaama Apple horey ushaqeyneysay.
IPhone 7 waxaa ku jiri kara amarka degdega ah
Sawir la sheegayo inuu kujiro wareegga taleefanka ee iPhone 7 ayaa tilmaami kara in terminalka cusub ee Apple uu si dhakhso ah u buuxin doono
Lumsing, hal xeedho oo shan qalab ah
Lumsing waxay na siisaa xeedho 40W ah oo noo oggolaanaysa inaan dib u buuxinno baytariyada ilaa shan qalab isla markaa isla markaana leh cabbir aad u yar
Duo, barnaamijka wicitaanka fiidiyowga ee uu sameeyay Google wuxuu yimaadaa macruufka
Duo, oo ah codsi ay Google ku talo jirto inay kula wareegto maamulka keli ah ee Skype, wicitaanada fiidiyowga, inkasta oo macruufka ay ka helayaan dhul dhagax ah.
Xanta ugu dambeysa ee ku hareeraysan iPhone-ka ayaa muujineysa in Apple ay soo bandhigi karto nidaam lacag deg deg ah iPhone 7 ee soo socda
Google ama Apple yaa haysta adeeg macmiil?
Waxaan si dhow u eegeynaa adeegga macaamiisha Google marka la barbar dhigo adeegga macaamiisha Apple.
Suunkaan ayaa kuu ogolaanaya inaad xirato saacad caadi ah iyo Apple Watch
Soo bandhigida Sinn Dual Strip, suunka kuu oggolaan doona inaad isku darto Apple Watch iyo saacaddaada caadiga ah ee aad jeceshahay isla maalintaas.
IPhone 8 fikrad guuradii tobnaad
Marka IPhone 7 aan wali la sii deynin, iPhone 8s kii ugu horeeyay ayaa durba wareegaya iyadoo lagu saleynayo wararkii ugu dambeeyay ee la daabacay
Sida loo tirtiro ama loo Qariyo Xiriirada Facebook-ga ee iPad ama iPhone
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo tirtiro ama loo qariyo xiriirada Facebook-ga ee iPhone iyo iPad, iyadoo casharkaan oo ah tallaabo-tallaabo tallaabo ah.
IPhone-kaaga ma dib ayuu u bilaabmaa habeenkii? Waxaan ku baraynaa sida loo xaliyo
Haddii iPhone-gaaga sidoo kale ay dhibaato ka soo gaarto dhibaatada rebootka habeenkii, waxaan kuu soo bandhigi doonaa sida ugu fudud ee loogu hagaajin karo casharkaan.
Sida looga saaro Jailbreak iPad si fudud oo loo adeegsado Cydia Eraser
Waxaan sameyn doonaa dib u eegis yar iyo cashar ku saabsan sida looga saaro Jailbreak adoo adeegsanaya Cydia Eraser oo ku jira iOS 9.3.3 talaabo talaabo ah
Aasaasihii Flipboard Apple rehire
Aasaasaha aasaasiga ah Evan Doll, sida ku xusan cusbooneysiinta LinkedIn, ayaa mar kale laga shaqaaleysiiyay Apple qaybta Caafimaadka.
Hordhaca Las Letras, waa lacag la'aan wakhti xaddidan
Codsiga aan maanta ku tusno inaad ku soo dejiso bilaash waa Hordhaca Waraaqaha oo leh qiime dhan 4,99 euro
Cleo, baddal si loo habeeyo Xarunta Xakamaynta ee iOS 9 (tweak)
Cleo waa xoqitaan noo ogolaaneysa inaan u habeynno xarunteena xakameynta iPhone-ka oo leh xulashooyin xiiso leh.
Iibinta IPhone SE waxay dharbaaxaysaa kuwii ugu yeeray fashil
Waxaan garwaaqsannahay in iPhone SE uu ku dhammaaday dib-u-cusbooneysiinta iibinta iPhone-ka si weyn, isagoo goosanaya iibsi aad u weyn
Apple wuxuu ka shaqeeyaa qalab cusub oo caafimaad oo imaan doona sanadka 2017
Sida ay sheegayaan wararka xanta qaarkood, Apple waxay ka shaqeyneysaa qalab cusub oo ka duwan kan Apple Watch, si ay ula socoto caafimaadkeena ayna bilaabi doonto sanadka 2017.
Iibinta IPhone waxay ku koraan adduunka oo dhan, marka laga reebo Isbaanish
Shirkadda Cupertino ayaa sii kordheysa marka la eego iibka ku dhowaad meel kasta oo adduunka ah in kasta oo "falanqeeyayaal" ay tilmaameen si kale.
Jawbone wuxuu sahmiyey iibinta qalabka soo saaraha qalabka
Sida laga soo xigtay daabacaadda Macluumaadka, soo saaraha halyeeyga ee tirakoobka jijimooyin ayaa laga yaabaa inuu sudhay calaamadda Iibsiga
Apple horeyba waxay ula shaqeysaa TSMC si ay u soosaarto processor-ka A11 10nm
Apple iyo TSMC waxay durba bilaabeen inay shaqeeyaan si ay u soo saaraan processor A11 oo la imaan doona qalabka IOS ee la sii deyn doono 2017.
Kadib khariidada fiasco, Apple wuxuu bilaabay inuu sii daayo betas dadweyne
Weligaa ma isweydiisay sababta Apple u bilaabay sii deynta macruufka betas? Hagaag hada waan garaneynaa jawaabta waana inay la xiriirtaa khariidadaha.
Foxconn waxay horeyba uga shaqeyneysaa kiisaska dhalooyinka iyo shaashadda OLED ee iPhone-ka 2017
Sida haddii wararka xanta ah ee aan akhrinay illaa iyo hadda aysan ku filnayn, waxaan baranay in Foxconn uu haddaba ka shaqeynayo sannad-guurada XNUMXaad ee iPhone.
Ruushka ayaa baaraya shirkadda Apple oo la sheegay inay ku heshiiyeen qiimaha iPhone 6s
Dhibaatada ugu dambeysay ee Apple soo wajahday waxay ka timid Ruushka, halkaas oo mas'uuliyiinta ka hortagga kalsoonida ay baari doonaan cabasho ku saabsan heshiis ku saabsan qiimaha iPhone
Sida loogu beddelo magaca adeegsadeena Pokémon Go
Casharkeena maanta waxaan ku tusineynaa sida loo badalo magaca isticmaalaha Pokémon Go oo leh seddex talaabo oo aad u fudud oo aan khasaaro laheyn.
WhatsApp wuxuu la soo noqdaa "bugfixes" iyo warar yar
Xallinta khaladaadka, in kasta oo had iyo jeer, lagu daro faahfaahin qaar nagu adkaatay inaan helno, oo la xiriirta dirista sawirrada.
Pokémon Go waa la cusbooneysiiyay, qaabka "keydinta batteriga" ayaa soo laabanaya
Waxaan kuu sheegeynaa waxa astaamahan cusub ee aan ka heli karno cusboonaysiinta ugu dambeysa ee Pokémon Go ay ka kooban yihiin, sida "keydinta bateriga".
Iibinta IPhone ee Hindiya ayaa hoos u dhacday 35%
In kasta oo uu yahay waddanka ay Apple ugu sharad badan tahay, iibinta taleefannada iPhone kama jawaabaan xiisaha shirkadda
Barnaamijka cusub ee Apple wuxuu siiyaa $ 200.000 qof kasta oo ogaada dayacnaanta software-ka
Apple waxay soo bandhigtay barnaamij ay 200.000 $ siinayso dadka isticmaala ee soo ogaada dayacanka dhanka amniga ee nidaamyadooda hawlgalka.
Apple ayaa daabacday xayeysiin cusub oo ku saabsan Shot on iPhone, midkan oo loogu talagalay Ciyaaraha Olambikada iyo ereyo ka yimid abwaan Maya Angelou.
Heerarka iyo abaalmarintooda markay fuulayaan Pokémon Go
Thanks to liistadan waxaad awoodi doontaa inaad ogaato heerarka kala duwan iyo abaalmarintooda markaad fuuleyso Pokémon Go, saadaashu waa furaha.
Apple waxay ku shaqeyneysaa qalabka dhegaha loo yaqaan 'Bluetooth'
Tan iyo markii ay soo baxeen wararkii ugu horreeyay ee ku saabsan inay suurtagal tahay in Apple uu joojiyo isticmaalka jaakada ...
Sidee looga saaraa Jailbreak iOS 9.3.3 iPhone ama iPad
Haddii aad ka daasho Jailbreak, waxaan kuu soo bandhigi doonaa sida looga saaro Jailbreak iOS 9.3.3 ee iPhone iyo iPad labadaba, waa wax aan macquul aheyn.
Waxaan falanqeyneynaa Leef iBridge, xulafadaada inay had iyo jeer boos ku yeeshaan iPhone-ka
Kaydinta gudaha ee iphone-keena waxay u egtahay inay si fudud ku dhamaato, marka maanta waxaan falanqeyneynaa Leef iBridge, oo xallin doona dhibaatadan.
Sida loo tirtiro App PP Store adigoon tirtirin Cydia
Casharradan maanta waxaan rabnaa inaan ku barinno sida looga saaro arjiga PP Store adigoon ka saarin Cydia, si fudud oo dhaqso leh.
Sida loo tirtiro keydadka aan ku hayno iCloud
Actualidad iPad-ka waxaan rabnaa inaan ku barinno sida loo tirtiro keydadka aan ku haysanno iCloud si fudud. Ka faa'iideyso kaydintaada.
Dhammaan wixii ku saabsan foox iyo Pokémon Go modules
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato fooxa iyo qaybaha Pokeparadas ee Pokémon Go, dhammaantood hel.
Nin baaskiil wata ayaa la il-daran gubashada darajada saddexaad kadib markii uu ka dhacay baaskiilkiisa isla markaana uu qabsaday iphone-kiisa dabka
Haddii aad caadi ahaan daawato bandhigyada badbaadada ama aad jeceshahay mawduuca, fursadaha ma ogtahay in ...
Instagram waxay bilaabaysaa Sheekooyin iyadoon laga baqaynin in lagu eedeeyo inay koobiyeeysay Snapchat
Instagram waxay bilaabaysaa Sheekooyin iyadoon laga baqayn in lagu eedeeyo inay koobiyeeysay Snapchat, laga bilaabo maanta waxaa loo heli karaa aaladaha iOS.
Dhinaca Madoow ee Jeel Jeelka Shiinaha, iyo Maxaad uga Cabsaneysaa
Waa maxay dhinaca mugdiga ah ee Jailbreak-ka Shiinaha? Miyaan ka baqnaa? Waxaan ku siineynaa furayaasha Jeel-jabkan aan nabdooneyn.
Sida loo demiyo macruufka 10 quwadaha widget-yada ah
Widgets iyo ogeysiisyada lagu muujiyey shaashadda qufulka ee iPhone-keena oo leh iOS 10 waa la jari karaa
Pangu wuxuu xaqiijinayaa in uusan jiri doonin JAILBILN iPhone 4s, 5 iyo 5c
In kasta oo rajo laga qabo in isticmaaleyaal fara badan oo wata aalado 32-bit ah ay awood u yeesheen inay ku raaxaystaan ​​JAILBREAK, tani suurta gal ma noqon doonto.
Intiin badan oo idinka mid ah ayaa fasax ku jira, Actualidad iPhone-ka waxaan wali ku jirnaa gunta canyonka oo aan ka soo tabinayno dhammaan wararka la xiriira Apple
[La cusbooneysiiyay]: Isticmaalayaasha isticmaalay warbixin ku saabsan jeel-jebinta Pangu waxay soo sheegaan gelitaanka aan la fasaxin ee koontooyinkooda
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ku xirxira qalabkooda qalabkii ugu dambeeyay ee Pangu waxay soo sheegaan gelitaan aan la oggolayn oo koontooyinkooda ah.
Apple wuxuu rukhsad u siinayaa iPhone oo leh laba SIM
Apple waxay hadda heshay xaqiijin xaqiijin xaqiijin ah oo u oggolaanaysa in lagu daro laba kaar oo SIM ah iPhone
WhatsApp hadda waxay ogolaaneysaa dirista iyo helitaanka GIF-yada
Xaaladdan waxaan ku aragnay gacanta koowaad sida GIFs si fudud loogu diri karo loona heli karo WhatsApp. Waxaan ku tusaynaa sida.
Tim Cook, oo ah agaasimaha guud ee uusan "qofna siinin wax dinaar"
Waxaa laga yaabaa in waqtiga qof uu u arko Tim Cook indhaha oo uu raali gelin ka bixiyo inuusan aaminin isaga, weligiis. Waxaan dib u eegeynaa shaqadii Tim Cook ee Apple.
Apple wuxuu sii wadaa inuu lumiyo dhulka Shiinaha
Shirkadda ku saleysan Cupertino waxay sii wadaa luminta saamiga suuqa mid ka mid ah suuqyadeeda waaweyn sannadihii la soo dhaafay.
Fiidiyowga ugu horreeya ee qaar ka mid ah EarPods oo leh xiriir danab ku shaqeeya
Ka luminta jaakada si loogu xiro dhagaha dhagaha ee nooca iPhone-ka ee soo socda ayaa umuuqda xaqiiqo in yar oo shaki kujiro iftiinka ...
Apple waxay leedahay akoonno tiro badan oo Twitter ah, kuwan waa
Apple horeyba waxay u leedahay tiro wanaagsan oo akoonno Twitter ah dhammaan noocyada su'aalaha iyo korantada. Waan kuu soo bandhigeynaa.
Apple waxay si rasmi ah u xaqiijineysaa xiisaha ay u leedahay furitaanka Dukaanka Apple ee Xarunta Ganacsiga ee Wolrd
Kadib sanado badan oo xan ah, Apple waxay si rasmi ah u xaqiijisay furitaanka soo socda ee Dukaanka Apple ee Xarunta Ganacsiga Adduunka, oo ku taal Manhattan hoose.
Patent-ka Apple wuxuu soo jeedinayaa in iPhone-ka mustaqbalka uu dhexgeli doono shaashadda Aqoonsiga Taabashada
Ma xasuusataa xanta ah in uu jiri doono iPhone leh Aqoonsiga Taabashada oo lagu dhex daray shaashadda? Patent-kan ayaa xaqiijinaya in Apple ay qorsheysay.
WhatsApp iyo farriimaha waxay wadaagaan cilad xagga amniga ah
Injineerada amniga kombiyuutarka ayaa soo gabagabeeyay in WhatsApp iyo fariimaha ay wadaagaan cilad dhanka amniga ah
Apple wuxuu ka furaa koontada twitterka Isbaanishka App Store @AppStoreES
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay hadda furtay xisaab cusub oo Isbaanish ah halkaas oo ay ku siiso taageero App Store af Isbaanish ah
Ruqsad cusub oo Apple ah ayaa na tusaysa iphone leh taaj dijitaal ah sida Apple Watch
Apple ayaa hada soo gudbisay codsi cusub oo patent ah gudaha Mareykanka halkaas oo aan ku arki karno taaj dijitaal ah ipadka, iPhone ama iPod taabashada
My Vodafone, Codsiga mobilada Vodafone waxyar ayaa la cusbooneysiiyay, oo ay ku jiraan naqshad cusub.
"Carpool Karaoke" waxay ku timaadaa Apple Music barnaamij gaar ah
Wareysiga caanka ah wuxuu saxiixay qandaraas gaar ah oo lagu sii deyn doono "Carpool Karaoke" todobaadle ah oo ku saabsan Apple Music.
SMS-ka xaqiijinta laba-tallaabada ah wuxuu lahaan karaa maalmo tiro leh
Maalin kasta oo dhaaftaa waxaan aaminsanahay aaladaha moobilkeena. Dhexdooda ayaynu ku xafidnaa sawirro, furaha sirta ah iyo nooc kasta oo macluumaad ah ...
Amazon waxay cusbooneysiisaa codsigeeda si ay uga dhigto mid dhaqso badan
Waxay ku siiyeen xoogaa yar oo waxoogaa ah barnaamijka taas oo u oggolaan doonta dadka isticmaala Amazon inay wax iibsadaan si dhakhso leh oo fudud.
Tim Cook oo ku saabsan Xaqiiqada Dareenka leh: "Waxaan sii wadeynaa maalgashi ballaaran"
Tim Cook wuxuu sheegay inay sii wadayaan maalgashiga culus ee ku saabsan Xaqiiqada Dareenka. AR miyuu noqon doonaa barxadda xigta ee muhiimka ah ee laga fiirsado?
Dhibaatooyinka GPS ka dib markii jailbreaking macruufka 9.3.3? Tijaabi tan
Lahaanshaha arrimaha GPS ka dib markii jailbreaking macruufka 9.3.3? Wax walba waxay leeyihiin xal waxayna noogu imaaneysaa iyada oo loo maro 'Cydia tweak'.
IPhoneku ma xunyahay? Maya, wax kasta oo kale waa waxa qaldan.
In kasta oo ay kaliya taagan tahay in IPhone-ka uu xun yahay, haddana xaqiiqda ayaa ah in taleefannada casriga ah aysan ahayn dhibaatada Apple, laakiin ay tahay iPad iyo Mac
IPhone 6SE ama iPhone 7? Isgoysyada Apple
Apple ayaa ka labalabeynaysa inta udhaxeysa boodboodka ilaa iPhone 7 ama sii jooga midka hadda haysta iPhone 6SE. Muxuu noqon doonaa go’aanka ugu dambeeya?
Waxaan ku sii dheganaan doonaa awooda Pokémon kuwaas oo ku saleysan astaamahooda si loo doorto kuwa ugu fiican Pokémon ee Pokémon Go.
Infojobs waxay rabeen inay waxbadan dhaafaan astaanta, nidaamka dalabka gabi ahaanba waa la cusboonaysiiyay waxqabadkiisana waa la hagaajiyay.
IPhone-ka oo wata qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanner' ayaa imaan kara 2018
Sida haddii Aqoonsiga Taabashadu aanu ku filnayn, xanta cusubi waxay hubinaysaa in 2018 iPhone ay ku jiri doonaan qalab iris ah ikhtiyaar ahaan.
Liistada ugu fudud ee Pokémon lagu horumarin karo Pokémon Go
Ku-guuleysiga Pokémon-ka mahadnaq nacnac gaar ah ayaa ah habka ugu dhakhsaha badan ee lagu helo khibrad. Ka faa'iideyso liiskayaga isbeddelada.
Kuwani waa halyeeyga gaarka ah ee Pokémon ee Pokémon Go
Kuwani waa halyeeyga gaarka ah ee Pokémon ee Pokémon Go mana dooneyno inaad ka maqnaato iyaga, akhri liistadayada Pokémon.
Lix bilood oo xabsi ah hackerkii galay akoonnada iCloud ee caanka ah
Eedeysanaha ugu horeeya ee xatooyada sawirada Aktarada kala duwan ee Hollywood ayaa lagu xukumay lix bilood oo xabsi ah
Sida looga saaro astaanta calaamadeynta markii la isticmaalayo Prisma
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo tirtiro astaamaha markaad isticmaalayso Prisma si sawiradaadu u noqdaan sidaad rabto adigoon xayeysiin.
Liiska Pokémon ayaa laga heli karaa Pokémon Go ukunta
Suurtagal ma tahay in la ogaado nooca Pokémon ee ka soo bixi doona ugxanta? Waxay umuuqataa inay tahay. Liiskan, waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaatid dhammaan Pokémon ee laga heli karo ukunta Pokémon.
Sida loo Jailbreak macruufka 9.2 - 9.3.3 leh Pangu
Waxaan kuu sharxaynaa talaabo talaabo ah sida loo Jailbreak macruufka 9.3.3 adoo adeegsanaya Pangu Windows. La socon kara macruufka 9.2 ilaa iOS 9.3.3.
In Actualidad iPhone waxaan rabnaa inaan kuu sheegno sida aad si sahal ah iskula jaan qaadi karto iyo talaabooyinka ku siinaya khibrad dheeraad ah ee ciyaarta.
Maanta waxaan rabnaa inaan ku tusino sida ugu fudud ee Jolteon, Vaporeon ama Flareon loogu helo khiyaanadan fudud ee loogu magac daray Evee.
Pokémon Go wuxuu durbadiiba iska dhigay Spain isagoo ah lambarka koowaad ee dalabka dakhliga ee App Store, sida lafilayo maanta.
Daadinta fiidiyowga kale waxay isbarbar dhigaysaa iPhone 6s iyo iPhone 7
Daadinta fiidiyowga kale waxay isbarbar dhigaysaa iPhone 6s iyo iPhone 7, aadna ugu eg dillaacii hore, taasoo xaqiijineysa wararka xanta ah.
Deutsche Bank waxay aaminsan tahay in iPhone 7 ay ku jiri doonaan laba sheeko oo xiiso leh oo aan cidna xusin
Sida laga soo xigtay Deutsche Bank, iPhone 7 waxaa ku jiri doona dhowr sheeko oo xiiso leh, laba ka mid ah oo aan cidina u mahadcelin illaa iyo hadda.
Apple wuxuu shatiyadeeyay nidaam 3D ah oo aan lahayn muraayadaha qalabka mobilada
Sida laga soo xigtay patent-kii ugu dambeeyay ee la yaqaan, Apple wuxuu ka fiirsan doonaa inuu soo saaro aaladaha mobilada ee noo oggolaan lahaa inaan daawanno waxyaabaha 3D ka kooban iyadoo aan muraayadaha la socon.
Apple waxaa laga dacweeyay inay qalabkeeda ku bedeshay kuwa dib loo habeeyay
Apple ayaa wajaheysa tijaabo cusub oo ku saabsan Mareykanka siyaasaddeeda ku saabsan beddelka boosteejooyinka ee AppleCare +, iyadoo la siinayo qalab casriyeysan
Shaashado jaban ayaa ku dambayn kara iPhone 7 mahadnaqa Gorilla Glass cusub
Gorilla Glass waxay horey u soo bandhigtay jiilkii ugu dambeeyay ee muraayadeeda, oo ah dhisme cusub oo ka dhigi kara iPhone 7 wax badan oo iska caabin ah.
Tufaaxu wuxuu caawiyaa inuu xidho websaydhka daadka ugu weyn ee Kickass Torrents
Maamulka Mareykanka ayaa xiray mulkiilaha la sheegay inuu leeyahay webbiga ugu weyn adduunka kadib Apple ...
Jawaabta taabashada ee iPhone-ka mustaqbalka ayaa ku ruxan kara dhowr jiho
Apple waxay soo bandhigtay jawaabta taabashada ah ama jawaab celinta Taptic ee Apple Watch waxayna umuuqataa in nooca soosocdaa uu kawareegi doono dhowr jiho.
Kaliya 9% dadka isticmaala iPhone ayaa iibsan doona iPhone 7
Warbixinta sahanka ayaa tilmaamtay in kaliya 9% dadka isticmaala nooc kasta oo iPhone 6 ama 6s ah ay ka fikirayaan iibsashada mustaqbalka iPhone 7.
Ka dib laba xayaysiis oo qurux badan oo xayawaan ah oo ah astaamaha ugu muhiimsan, Apple ayaa daabacday laba duubis kale oo ay la socoto iPhone 6s loogu talagalay Shot on iPhone.
Sida loo bilaabo Pokémon La soco Pikachu way ka fududdahay sida aad u malaynayso haddii aad raacdo talaabooyinkan, dhammaantood ku hel habka ugu fudud.
Kuwani waa wararka ku saabsan iOS 10 Beta 3
IOS 10 Beta 3 waxay la timaadaa warar muhiim ah sida awooda lagu furo iPhoneka adiga oo aan riixin badhanka guriga. Waxaan ku tuseynaa fiidiyoow.
Isbarbardhiga xawaaraha ee udhaxeeya iOS 10 Beta 3 iyo iOS 9.3.2
Waxaan mar kale kuu soo qaadaneynaa isbarbardhiggan fiidiyowga ah ee waxqabadka iOS 10 B3 iyo iOS 9.3.2 ee iPhone 6s iyo iPhone 5s xushmad leh iAppleBytes.
Snapchat wuxuu ku darayaa taageerada Bitmoji ee emojisyada gaarka ah
Snapchat wuxuu ku darayaa taageerada Bitmoji ee emojisyada gaarka ah, muuqaal cusub oo u eg mid kasta oo ka mid ah kuwa lagu daray Snapchat.
Barnaamijka cusub ee 'ResearchKit' wuxuu sheeganayaa inuu gacan ka geysto daaweynta arthritis-ka
Codsiga ugu horreeya ee qalabka macruufka ee sheeganaya inuu gacan ka geysto daaweynta arthritis-ka ayaa hadda la heli karaa iyada oo loo mahadcelinayo ResearchKit.
Ciidanka Mareykanka waxay Android ugu beddelaan iPhone 6s shaqo xumo darteed
Kooxda Hawlgalka Gaarka ah ee Ciidanka Mareykanka waxay ku beddeli doonaan Galaxy Note hore iPhone 6s.
Saamiyada Apple ayaa ka kacay $ 100 lix toddobaad kadib
Kadib lix toddobaad oo xoogaa qiimo yar, saamiyada Apple AAPL waxay dib uga noqdeen $ 100. Ma bilaabayaan inay soo kabtaan?
Tilmaamaha Pokémon Go, tilmaamaha iyo tabaha lagu hayo dhammaantood (2/2)
Barnaamijka iPad-ka waxaan kusii wadaynaa talooyinkeena ku saabsan Pokémon Go maanta, hagaheena cajiibka ah ee tabaha iyo toobiyeyaasha loogu talagalay Pokémon.
Toogashadii ugu dambeysay ee xayaysiinta iPhone-ka waxay ka kooban tahay xayawaanno
Apple ayaa soo saartay laba xayeysiis cusub oo loogu talagalay Shot on iPhone (oo lala qabtay iphone) iyada oo xayawaanku yihiin jilayaasha ugu weyn.
Dalkii ugu dambeeyay ee ay Apple Pay hadda soo degtay waa France, seddex isbuuc markii ay timid Switzerland.
Lix qalad oo aad u badan tahay inaad sameyneyso markaad ciyaareyso Pokémon GO
Waa xaqiiqo: ciyaarta xilligan iyo mustaqbalka waa Pokémon GO. Waxaad hubtaa inaad khaladaadka qaarkood samayso. Halkan waxaan kuu sheegeynaa sida looga fogaado.
Apple kuma aamini doonto Samsung inay sameyso processor A11 sidoo kale; wuu ku sii socon doonaa TSMC
Haddii xanta ay run tahay, oo aan waxba naga dhigaynin inaan u maleyno inaysan kiiska noqon doonin, A10 waxaa soo saari doona gebi ahaanba shirkadda TSMC. Laakiin ka waran processor-ka A11?
Tilmaamaha Pokémon Go, tilmaamaha iyo tabaha lagu hayo dhammaantood (1/2)
Waa inaan kuu keennaa hage tilmaam leh, tabaha iyo wararka ku saabsan Pokémon Go. Marka waxaad kuheli kartaa dhammaantood habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan.
Fikradaha shirqoolka Shiinaha ee Pokémon GO
Shiinaha ayaa durbaba dhigaya mashiinka dacaayadaha si uusan ugu talin in Pokémon GO lagu isticmaalo dalka, cabsi laga qabo in la muujiyo macluumaadka militariga
SoftBank waxay ARM ku qabsatay 32.000 milyan
SoftBank waxay ARM u heysaa $ 32.000 bilyan, oo ah macaamil ganacsi weyn oo carqaladeyn doona suuqa moobiilka adduunka.
Pokémon Go wuxuu gaaraa 26 waddan oo dheeri ah oo wuxuu mar kale buuxiyo server-yada
Pokémon Go wuxuu shalay gaadhay 26 dal oo cusub inkasta oo ay xaqiiqadu tahay in server-yadu aysan wali cabireynin, taas oo keeneysa qanacsanaanta isticmaaleyaal badan.
Poke Radar, hadana khayaano kale oo ku saabsan App Store
Maanta waxaan ka helnay kii labaad ee laga soo degsado App Store-ka Poke Radar, codsi sed been ah oo gabi ahaanba aan waxtar lahayn.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu shacabka kula hadlayaa FaceTime inta lagu jiro Inqilaabka
Madaxweynaha Turkiga wuxuu adeegsaday FaceTime si uu ula xiriiro saxafiyiinta intii uu socday afgambiga jimcihii la soo dhaafay
Apple waxay dooneysaa inay bixiso farshaxanno badan, taas oo dhaawici karta Spotify
Apple waxay damacsan tahay inay lacag badan siiso fanaaniinta ay ka kooban yihiin waxyaabaha ay tabinayaan, waana wax dhaawici kara adeegyada kale sida Spotify.
Apple waxay quseysaa diiwaangelinta astaanta shirkadda AirPods
Codsi ganacsi ayaa xaqiijinaya in Apple uu damacsan yahay inuu soo bandhigo AirPods, qalabka dhegaha ee Bluetooth oo aan lahayn fiilooyin u dhexeeya.
Tigra BXTIIP6P, buke baaskiil aan cabsi lahayn iyo biyo aan buurnayn
Ma waxaad raadineysaa shooga iyo daboolka dareeraha u adkeysta baaskiilkaaga? Hagaag, Tigra BXTIIP6P waa ikhtiyaar aad ufiican oo lagu tababaro dhammaan noocyada baaskiil wadista.
Kalandarka Peek, kaalandarka bilaashka ah ee waqtiga xadidan
Barnaamijka Kalandarka Peek ayaa loo heli karaa soo dejin gebi ahaanba bilaash ah wakhti xaddidan.
Shirkadda Spotify waxay soo saartay laba idaacadood oo cusub
Saldhigyadan gaarka ah ayaa ka caawin doona Spotify inay wax yar ka fiicnaadaan aaggan ka dhanka ah Apple Music, waxaan kuu sheegi doonaa waxa ay ka kooban yihiin.
Batariga iPhone 7 wuxuu ka weynaan karaa 14% kan hadda jira ee iPhone 6s
Xanta ugu dambeysa waxay sheeganeysaa in iPhone 7 ee soo socda uu arki karo sida batteriga moodeelkan uu 14% uga sarreeyo kan hadda jira.
Sida loo badbaadiyo batteriga inta aad ciyaareyso Pokemon Go
Waxaan ku siineynaa talooyin dhowr ah si aad u keydiso batteriga inta aad ciyaareyso Pokemon Go, sidaa darteed waxaad ka faa'iideysan kartaa safar kasta oo aad ugaarsan kartaa Pokemon.
Sawirro qulqulaya: maxay tahay iyo sida loo isticmaalo
Waa maxay socodka sawirada? Sidee loo isticmaalaa? Casharkaan waxaan ku bari doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nidaamkan daruurta Apple.
Maalinta caadiga ah ee Teendhada ayaa hadda laga heli karaa App Store
90s-kii caadiga ahaa, Maalinta Teendhada, ayaa hadda ku soo degtay App Store oo waxaan hadda ugu raaxeysan karnaa taleefannadeenna iPhone-ka iyadoo lagu beddelayo 4,99 euro
Maanta waa Amazon Prime Day 2016. Ka faa'iideyso dalabyadan siyaada ah ee qalabkaaga Apple!
Maalintii baa timid: maanta waa Amazon Prime Day 2016, waa maalin ay Amazon siiso heshiisyo waaweyn macaamiisha Premium. Halkan waxaad ku leedahay xulashada ugu fiican.
Noocyadii ugu horreeyay ee soo bandhigida ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus ayaa soo muuqday
Sawirada ugu horreeya ee moodooyinka soo-gaadhista ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus ayaa soo muuqanaya oo labada kamaradood iyo Isku xidhka Smart-ka ayaa la xaqiijin doonaa.
Sida loo soo dejiyo waraaqaha HomeKit
Loogu talagalay dadka jecel waraaqaha, maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa waraaqaha derbiga ee Apple ku isticmaashay HomeKit ee iOS 10
Sida loo rakibo Pokemon wadan kasta
Actualidad iPhone waxaan rabnaa inaan ku tusno sida loo rakibo Pokemon GO taleefankaaga iPhone inkasta oo aad joogto Spain ama wadan kale oo aan la heli karin.
Khariidadaha 2Go Pro bilaash wakhti go'an Orod!
Codsi ku jira noocyadiisa PRO ee App Store wuxuu ku kacayaa wax aan ka yarayn € 9.99 waxaana kuu sheegeynaa sida loogu helo bilaash.
Xanta badan ee ku saabsan midabka mustaqbalka iPhone 7
IPhone cirro cirifka ah ayaa isbadali kara oo dib ugu noqon kara inuu noqdo cirro madow oo u dhaw madow, sida laga soo xigtay ...
Motion Stills, barnaamijka si weyn u hagaajiya Sawiradaada Tooska ah
Google waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ku hagaajiso Sawirada Apple Live iyadoo la adeegsanayo codsi ka badan gudashada waajibaadkeeda isla markaana si weyn u hagaajineysa tallaalada dhaqdhaqaaqa
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa barnaamijka Apple Music ee loogu talagalay Android
Apple ayaa hadda soo saartay cusbooneysi cusub oo loogu talagalay barnaamijka Apple Music ee ku saabsan Android hagaajinta arrimo kala duwan oo loo maqli karo
Tixgelinnada ka hor hoos u dhigista laga bilaabo iOS 10
Waxaan ka tagi doonnaa tixgelinno ka hor hoos u dhigista macruufka 10, sababtoo ah isticmaaleyaal badan ayaa jeclaan doona imaatinka beta dadweynaha.
Akadeemiyada Horumarinta ee ugu horreysa ee iOS ayaa laga furay Naples
Hadaad sida caadiga ah raacdo qodobbada muhiimka ah ee ay Apple qabato sanad walba, gaar ahaan shirka horumarinta ee shirkadda ...
Abaalmarinta Sawirka Sawirka ee iPhone 2016 horeyba wuxuu u leeyahay guuleystayaal
Abaalmarinta Sawirka Sawirka iPhone 2016 ayaa dhawaan lagu dhawaaqay guuleystayaasha, kuwaas oo kaqeybgalay 139 dal oo 19 qaybood ah
Shuruudaha looga baahan yahay inaad ku raaxaysato ikhtiyaarka Auto Unlock ee Apple Watch ee macOS Sierra
Muuqaalka cusub ee 'Auto Unlock' ee Apple Watch iyo macOS Sierra wuxuu leeyahay shuruudo aysan isticmaaleyaal badani jeclaan doonin. Waxaan ku tusaynaa waxa ay yihiin
Isbarbardhigga udhaxeeya iOS 9.3.2 iyo iOS 10 Beta 2 [VIDEO]
Waxaan kuu soo qaadaneynaa muuqaal isbarbardhig ah oo u dhexeeya macruufka 9.3.2 iyo iOS 10 Beta 2, oo ku saabsan qalab duug ah sida iPhone 5s iyo mid cusub sida iPhone 6s.
Kiis iphone-ka u eg oo qoryaha wata ayaa khalkhal gelin kara
Rakaab ka mid ah duulimaadka garoonka ugu mashquulka badan London ayaa la xiray isagoo sita kiis iPhone ah oo u eg qoriga.
Apple Pay waxaa hadda laga heli karaa Switzerland
Dalkii ugu dambeeyay ee gacmo furan ku soo dhoweeya Apple Payment waa Switzerland, halkaasoo hadda saddexda bangi ee waaweyn ay horeyba taageero uga siiyeen.
AKG K451, sameecadaha dhagaha ee la siiyay sanadkii 2009 tayadooda, hadana way ka jaban tahay
Haddii aadan jeclayn dhagaha dhagaha ee Bluetooth ama dhagaha dhagaha, AKG K451 ayaa ku xiiseyn kara. Waxay u gudbeen inay ku guuleystaan ​​abaalmarinta tayada ay bixiyaan.
Apple wuxuu ku dhacaa kaalinta shanaad ee suuqa Shiinaha sababtoo ah iibka oo hooseeya
Apple ayaa hoos ugu dhacday kaalinta shanaad marka la eego iibka terminal ee Shiinaha, iyadoo ka tagtay soo saarayaasha maxalliga ah afarta boos ee ugu sarreeya.
Apple waxay u baahan tahay alaab-qeybiyeyaasheeda inay hoos u dhigaan qiimaha iPhone 7
Apple waxay ubaahantahay soo-saareyaasheeda dibada inay yareeyaan qiimaha IPhone 7 qaybood, inkasta oo hoos udhaca caalamiga ee iibka
Nintendo wuxuu sii wadi doonaa sharadka mobilada; waxay bilaabi kartaa kantarool u gaar ah
Waxay umuuqataa in Nintendo uu sharad adag ku gali doono qalabka mobilada. Waxa xiga ee ay bilaabi karaan waa ilaaliyayaasha ciyaaraha fiidiyowga moobiilka.
Sida loogu sahlo Xaqiijinta Laba Xaqiiq ee koontadaada Apple
Aqoonsiga laba qodob ayaa noqda mid lagama maarmaan u ah in la isticmaalo qaar ka mid ah astaamaha cusub ee iOS 10, macOS Sierra iyo watchOS 3. Waxaan sharaxeynaa sida loo kiciyo
Apple waxay ku riixaysaa iibiyeyaasha inay yareeyaan farqiga faa iidadooda
Apple ayaa riixeysa alaab-qeybiyeyaasha ka kooban iphone si loo yareeyo kharashka soo-saarista iyaga
CloudMagic waa la cusbooneysiiyay taas oo ka dhigaysa mid la jaan qaadi karta macruufka 10
loudMagic waa la cusbooneysiiyay taas oo ka dhigaysa mid la jaan qaadi karta macruufka 10, oo ah wax faahfaahin ah oo lagu xisaabtamayo dadka isticmaala aniga oo kale ah ee tijaabiya betas.
Yomvi waa la cusbooneysiiyay oo hadda waxay u oggolaaneysaa waxyaabaha la soo dejisan karo
Laga bilaabo isla maalintaas maanta iyo wixii ka dambeeya cusbooneysiinta dalabka, waxaad bilaabi kartaa inaad kala soo baxdo waxyaabahaaga Yomvi ee macruufka ah.
Dalxiiskii 'Tour de France' ayaa soo noqday barnaamijki rasmiga ahaana wuu ku soo laabtay si uu ula socdo
Dalxiiska 'Tour de France' wuxuu durbaba ka dhex wareegayaa waddanka Gallic-ga waxaadna kala socon kartaa meel kasta adigoo uga mahadcelinaya codsiga rasmiga ah
Insta360 Nano, ka duubo iPhoneº 360º fiidiyow
Kaamiraddan yar ee ku xiran qeybta hoose ee iPhone-ka ayaa noo oggolaaneysa inaan si toos ah uga duubno iPhone-ka 360º fiidiyow.
Apple waxay diiwaangelinaysaa "Night Shift" Mac, Apple Watch iyo CarPlay
Adigu horeyba waad ugu isticmaashay iOS, laakiin Apple waxaa la ogaaday inay diiwaangelinayso "Night Shift" ee Mac, Apple Watch, iyo CarPlay.
Toddobaadkan Apple Music, iOS 10 iyo JAILBILY waxay ahaayeen halyeeyada ugu muhiimsan ee wararka la xiriira iPhone iyo adduunka Apple.
Khayaalkii Ugu Dambeeyay: Brabe Exvius wuxuu ku degaa App Store
Waxaannu wax yar kaaga sii sheegi doonnaa Fantasy Final: Brabe Exvius oo yimid App Store oo aan joojinayn soo degsashada goosashada.
Aviar waxay heshaa wararka qaar cusbooneysiinti ugu dambeysay
Waa kuwan waxa ku cusub cusbooneysiintii ugu dambeysay Aviary, tifaftiraha sawir gacmeedka ee ay leedahay Adobe.
Tani waxay noqon kartaa meesha cusub ee iPhone 7 madow
Kadib xanta ku saabsan iPhone 7 madow oo leh badhanka xasaasiga ah iyo cadaadiska, hadda waxaan haynaa naqshado cajiib ah.
Apple waxay ka jawaabaysaa Spotify: "waxaad na siisay cusbooneysiin aan u hogaansamin dukaanka App"
Jawaabta Apple ee warqadda Spotify oo ay ka cabaneyso inay dooneyso inay wax u dhinto tartanka ayaa horay u dhacday, lagamana khasaarin.
Shirkadda Spotify ayaa ku eedaynaysa shirkadda Apple inay dhaawaceyso tartankeeda iyadoo diidday barnaamijkeedii ugu dambeeyay ee cusbooneysiinta
Shirkadda Spotify ayaa ku eedeysay Apple inay si ula kac ah u dhaawaceyso tartanka maxaa yeelay waxay diideen cusbooneysiintii ugu dambeysay. Ma ku saxsan yihiin cabashada?
Aaway Apple Pay ee Isbaanishka?
Waxaan gaarnay dhulbaraha sanadka 2016 walina wax war ah kama heyno goorta Apple Pay imaaneyso Spain. Muxuu nidaamka lacag-bixinta moobiilku u gaari la’yahay Spain?
Muuqaalka cusub ee Netflix uma muransana sida kan Instagram
Laga soo bilaabo 28-keedii, dalabka aan u isticmaalno inaan ku daawanno adeegga fiidiyowga ee ugu caansan adduunka ayaa yeeshay astaan ​​cusub.
Si fudud iPhone 6s kaaga ugu badalo iPhone 7 [HUMOR]
Raggaan aan hoos ku tusi doonno waxay na barayaan sida loogu beddelo iPhone 6-keena iPhone 7 dhowr tallaabo oo fudud.
Samsung ayaa 40 milyan oo OLED ah u samayn doonta shirkadda Apple
Sida laga soo xigtay daabacaadda DigiTimes, Samsung waxay ballaarin doontaa soo saarista shaashadda OLED si ay awood ugu yeelato inay siiso tiro aad u badan iPhone-ka.
iClever IC-WS03, oo ah taageero alwaax ah oo aan ka qaadi karno iPhone iyo Apple Watch
Haddii aad raadineysid saldhig lacag bixin oo fudud, iClever IC-WS03 ayaa kuu oggolaan doonta inaad ka qaadatid labada iPhone iyo Apple Watch qiimo aan la diidi karin.
Waxay ka dacweeyaan Apple iyagoo sheegaya in iphone-ka la sharciyeeyay 1992
Qof reer Florida ah ayaa Apple ka dacweeyay asaga oo ku eedeeyay in uu ikhtiraacay iphone 15 sano ka hor intaan la soo saarin sanadkii 1992.
Shuruucda Shiinaha ayaa saameyn ku yeelan karta App Store
Shuruucda Shiinaha waxay saameyn ku yeelan kartaa App Store iyo sida Apple u ilaaliso asturnaantayada macruufka iyo macOS.
Dillaacyada ugu horreeya ee dhegaha Dhegaha oo leh fiilo danab leh
Waxaan maanta helnay daadadkii ugu horreeyay ee dhegaha Dhegaha oo leh fiilo hillaac ah, sawirro u muuqda inay muujinayaan mustaqbalka iPhone 7.
Sawir cusub oo midab leh oo ku saabsan ololaha iPhone
Ololahii kala duwanaa ee ay soo bandhigtay shirkadda ku saleysan Cupertino ee ku magac dheer Shot on iPhone, na tus sawirro ...
Iibsashada iibka yar ee iPhone 7 waxay yareyneysaa tirada amarada qaybaha
Sida laga soo xigtay dhowr shirkadood oo ka soo jeeda Aasiya, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ma dhigayso amarro waaweyn oo loogu talagalay qaybaha loogu talagalay iPhone 7
Todoist wuxuu helaa cusbooneysiin muuqaal weyn
Wararka ku saabsan iPhone-ka waxaan rabnaa inaan kuu sheegno waxa ay ka kooban yihiin wararka ku jira cusbooneysiinta Todoist ee iPhone iyo iPad.
Zestia, sida loo rakibo dukaankan kale ee loo yaqaan 'Cydia' oo aan lahayn JAILBREAK
Ma xasuusataa Mojo? Zestia waa dukaan kale oo beddel ah oo noo oggolaan doona inaan ku rakibno qaar ka mid ah codsiyada aan taageerin Apple, sida emulators-ka caanka ah.
3-in-1 8 Pin Charger Dock, oo ah meel aad u tiro badan oo qiimo jaban ugu jirta iPhone-kaaga
Ma waxaad u raadineysaa Dock iPhone-kaaga ah laakiin Apple-ka rasmiga ah miisaaniyad ma heysto? 3-in-1 8 Pin Charger Dock waa ikhtiyaar aad u xiiso badan.
Apple waxay shatiyadeysaa nidaam si aadan ugu duubin riwaayadaha
Apple wuxuu sameeyaa rukhsad Apple ah oo ka hortagi karta duubista aan fiicnayn ee taleefannada gacanta ee riwaayadaha, tan iyo wax badan oo dheeri ah.
Google waxay bilaabi kartaa taleefankeeda casriga ah dhamaadka sanadkaan
Wararkii ugu dambeeyay ee ay daabacday The Telegraph ayaa sheegaya in Google laga yaabo inay leedahay ujeedo ah inay ku soo bandhigto taleefankeeda casriga ah suuqa dhexdiisa sanadkan
Tani waa fikradda ah in Apple ay tahay inay ku isticmaasho iPhone-ka hal gacan
IPhone-ka miyaanu aad u weyneyn oo hal gacan lagu isticmaali karo? Hagaag, figradan ku lifaaqan shatiga waxay noqon kartaa xalka xiisaha leh.
IPhone 7 Gray Space wuxuu noqon doonaa mid aad u madow
Sida laga soo xigtay xantaas, iPhone-ka cirifka cirifka ah kuma baabi'i doono bilawga iPhone 7. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay noqon doonto? Waan kuu sheegi doonaa!
Asturnaanta Kala Duwan: waxaan go'aan ka gaari doonnaa haddii aan dooneyno inaan xogta la wadaagno Apple
Si ka duwan sida shirkadaha kale ay u adeegsadaan nidaamyadan, kaqeyb qaadashada Asturnaanta Kala-duwanaanta Apple waxay noqon doontaa ikhtiyaari; Ma la wadaagi doontaa xogtaada Apple?
Mar labaad waxaan ku tusineynaa soo koobid leh usbuucii ugu fiicnaa ee ku hareeraysnaa iPhone gaar ahaan iyo guud ahaan shirkadda ku jirta Apple.
Rodeo Stampede, oo ka socda abuurayaasha Waddada Crossy, waa ciyaar aan caadi ahayn oo waqtiga lagu dhaafinayo
Maanta waxaan kuu keenaynaa Rodeo Stampede, oo ah ciyaar caadi ah oo looga gudbayo waqtiga noqonaya hogaamiyaha lagala soo baxayo App Store, abuureyaasha Crossy Road.
Albaabkii ugu dambeeyay ee Adele ugu dambeyntii wuxuu garaacay Apple Music
Albaabkii ugu dambeeyay ee Adele wuxuu ugu dambeyn imaanayaa Apple Music, albumkaan sidoo kale waxaa laga heli doonaa Amazon Prime Music, Spotify iyo Tidal.
Soo dejiso macruufka cusub ee iOS 10 iyo macOS Sierra
IOS 10 waqtigan xaadirka ah waxay noo keentay uun gidaar. Waraaqda aan kuu sheegayno sida looga soo dejisto iPhone-kaaga ama iPad-kaaga.
AOMAIS IPX7, kuhadalka ku hadla bluetooth-ka si aad ugu qaadato barkadda
Ma dooneysaa inaad muusikadaada u qaadato barkadda? Si fiican u fiirso: kuhadalka AOMAIS IPX7 Bluetooth wuxuu ku siiyaa dhawaq weyn meel yar wuuna qoyan karaa!
IPhone 7 wuxuu beddeli doonaa meesha uu ku dhow yahay shidma dhawaanshaha iyo nalka hareeraha
Wararkii ugu dambeeyay ee ka hadlaya iPhone 7 ee soo socda, waxay soo jeedinayaan in shirkaddu ay beddeli doonto goobta ay ku sugan yihiin dareemayaasha shaashadda
Sida Kodi loogu rakibo iPhone iyo Apple TV 4
Ma jeceshahay inaad ku rakibto Kodi taleefankaaga iPhone-ka ama Apple TV oo aadan garanayn meel aad ka bilawdo? Hagaag, qodobkaan waxaan kuugu sharaxeynaa timo iyo calaamado.
Xiaomi Bluetooth Metal Speaker, afhayeenka yar ee awooda badan ee had iyo jeer kula socon doona
Ma waxaad raadineysaa afhayeen yar oo tayo leh? Xiaomi Bluetooth Metal Speaker waa afhayeen awood badan oo u yar sida qalin qalin.
Sida looga saaro astaanta beta loona daayo barnaamijka beta beta
Haddii aad ku daashay isku dayga noocyada kala duwan ee macruufka betas, waxaan ku tusi doonaa sida aad uga tagi karto, adigoo tirtiraya astaanta u dhiganta.